ဘုရင်ယောသံ၏ အသက်တာကို လေ့လာခြင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 17/03/2013
Posted in: ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း.	Tagged: ဝိညာဉ်ရေး, ယောသံ.	Leaveacomment
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော လူများစွာကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသူများသည် ဤလောကတွင် အမှန်တစ်ကယ် ရှိခဲ့သော နေရာများတွင် အမှန်တစ်ကယ် ရှိခဲ့သောလူ များဖြစ်ကြပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ကဲ့သို့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားကာ လုပ်ကိုင် နေကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။၊ ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံ တစ်ရာကြောင့် ပျော်ရွင်နေသကဲ့သို့ ထိုသူများသည်လည်း ထိုနည်းတူပင် တွေ့ကြုံခံစားကြရသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော် ထဲတွင် ယောသံဆိုသည့် ဘုရင်တစ်ဦး၏ အသက်ရှင်မှုအား လေ့လာကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာကို ဖတ် နေသော စာဖတ်သူအများစုသည် ရှင်ဘုရင်များ မဟုတ် နိုင်သော်လည်း၊ ရှင်ဘုရင် ယောသံ၏ အသက် ရှင်မှုထဲမှ အသက်တာ အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သင်ခန်း စာရရှိနိုင်သည်။ ယောသံသည် ဣသရေလ လူမျိုးများ ဖောက်ပြန်ပြီး အခြားသော ရုပ်တုများကို ကိုးကွယ်နေသော ကာလ အတွင်း၌ ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများ သည် အသက်ရှင်သာ ဘုရားသခင်ကို စွန့်လွှတ်ကာ ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများမှ ရုပ်တု ထုလုပကိုးကွယ်ကြသော သူများ၏ အသက်ရှင်မှုများအတိုင်း အတုယူကာ အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။ သင်၏ အသက်တာတွင် ထိုအဖြစ်မျိုးကဲ့ သို့သောအဖြစ်မျိုးကို တွေ့မြင် ခံစားဖူးပါသလား။ သင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိ သောလူများက အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်ကို မသိမြင်သေးဘဲ အခြားသောရုပ်တုများကို ကိုးကွယ်နေသည်ကို သင်တွေ့မြင် ပါသလား။ ထိုအဖြစ်ပျက် မျိုးသည် ယနေ့အဖြစ်ပျက်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်း သည်မှာ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော များစွာ သောလူများ သည် စစ်မှန်သော၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ် သော တစ်ပါးတည်းသော ဘုရားသခင်ကို မသိ တော့ဘဲ များပြားလှသည့်အခြားသော အရာများ ကို ကိုးကွယ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
၆ရာ ၂၇း ၁-၆ ကိုဖတ်ပါ။
ယောသံသည် အသက် နှစ်ဆယ် ငါးနှစ်ရှိသော် နန်းထိုင်၍ ယေရုရှလင် မြို့၌ တဆယ့်ခြောက်နှစ် စိုးစံလေ၏။ မယ်တော်ကား ဇာဒုတ် သမီး ယေရုရှာ အမည်ရှိ၏။ ထိုမင်းသည် ခမည်းတော် သြဇိ ကျင့်သမျှအတိုင်း ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ တရားသော အမှုကို ပြု၏။ သို့ရာတွင် ထာဝရ ဘုရား၏ ဗိမ္မာန်တော်ထဲသို့ မဝင်။ ပြည်သူ ပြည်သားတို့သည် မတရားသဖြင့် ပြုကြသေး၏။ ထိုမင်းသည် ဗိမ္မာန်တော် အထက် တံခါးကို လုပ်၍၊ သြဖေလ မြို့ရိုးကို အလွန် ခိုင်ခံစေ၏ ယုဒတောင်ရိုးပေါ်မှာ မြို့များကို၎င်း၊ တော၌ ရဲတိုက်များနှင့် ပြအိုးများကို၎င်း၊ တည်ထောင်လေ၏။ အမ္မာန် ရှင်ဘုရင်ကိုလည်း စစ်တိုက်၍ နိုင်သဖြင့် နိုင်သောနှစ်တွင် အမ္မုသားတို့သည် ငွေအခွက် တစ်ထောင်၊ ဂျုံကောရ တသောင်း၊ မုယော တစ်သောင်းကို ပေးရကြ၏။ ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်တွင် ထို့အတူ ပေးရကြ၏။ ထိုသို့ ယောသံသည် မိမိဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရားရှေ့တော်၌ မိမိအကျင့်တို့ကို ပြင်ဆင်သောကြောင့် တန်ခိုးပွားသတည်း။ (၆ရာ ၂၇း၁-၆)
အခန်းငယ် ၂ တွင် ယောသံ၏ အ ကြောင်းကို စာရေးသူကမည်သို့ ဖော်ပြထား သနည်း။
– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – -။
ယောသံသည် မိမိဖခင်သြဇိကျင့်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြု၏ ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကောင်းပြီ၊ အခြားသော ရုပ်တု များကို ကိုးကွယ်နေသော လူများစွာထဲမှ ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ တရားသောအမှုကိုပြုသော ထိုကဲ့ သို့သော မိသားစုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိဘေး ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူများ၏ အသက်ရှင်သည့် ပုံစံအတိုင်း အသက်မရှင်ဘဲ ဘုရားသခင်မှ ထိုသူတို့ အား ပြောထားသည့်အတိုင်း အသက်ရှင်လိုက် လျှောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှေးကာလမှ ဘုရားသခင် သည် သူ၏လူမျိုးများအားပေးသော တရားတော် အတိုင်း လိုက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောသံ သည်လည်း သူ၏အသက်တာတွင် ဖခင်အား စံပြ ထားကာအသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသြဇိ သည်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။
သင်၏ အသက်တာ၌ အသက်ရှင်သော ဖန်ဆင်း ရှင်ဘုရားသခင်၏ နောက်သို့လိုက်ရန်အ တွက် မည်သူတို့သည် သင်၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြ သနည်း။
အားလုံးတွင် မိမိ၏မိသားစုများထဲမှ အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်အား နောက်လိုက်ရန် အတွက် မိမိ၏စံပြအဖြစ် ထားနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးရှိမည်မှာ မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုများ ပင်လျှင် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကို မသိသေး သောသူများပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် စံပြပုဂ္ဂိုလ် မရှိနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုများ အတွက်၊ သားသမီးများ အတွက်၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူများအ တွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦးဖြစ်ရန် ခေါ်တော်မူခြင်း ခံရသောသူ ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အခြားသောလူများ အတွက် ခရစ်တော်၏ ပုံသက်သေကောင်းများ ဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ အသွင်ပြောင်းလဲ စေရန် နှုတ်ကပတ်တော်အား ပြန်၍ ဖတ်ကြည့် ပါ။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ယောသံနှင့် သူ၏ဖခင်သြဇိအား စံပြထားကာ အသက်ရှင် ခဲ့ကြသလား။
– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – -။
သူတို့စံပြထားကာ အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ သည်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်။ သူတို့ သည် အကျင့်ပျက်သောအရာများကိုသာ ဆက် ၍ လုပ်ဆောင် အသက်ရှင်နေသေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ကြည့်လျှင် လူများစွာသည် ဘုရားသ ခင်မနှစ်သက်သည့် လမ်းများကိုသာ ဆက်၍ လိုက်ကာ အသက်ရှင်သည်ကို တွေ့မြင်ကာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်အား သိမြင်ပြီး မိမိ၏ ကယ်တင်ရှင် သခင်အဖြစ် ယုံကြည် လက်ခံသကဲ့သို့ အခြားသော သူများ သည်လည်း ထိုနည်းတူ ရရှိခံစားနိုင်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်သည် အလိုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပတ်ဝန်းကျင်၌ များစွာသော လူများသည် လမ်းမှား၌ ဆက်လျှောက်ကာ မှားယွင်းသည့် အကျင့်များနှင့် အသက်ရှင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ထိုအရာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်နည်း။ ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၅ ကိုဖတ်၍ မည်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်ရမည်ကို ရေးချပါ။
– – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – -။ ရှင်ပေါလုက ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိသော လူများ ထံသို့ စကြာဝဠာ၌ ထွန်းလင်းသောကြယ်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရန် ရေးသားခဲ့သည်။ အလွန်မှောင် မိုက်သော ညတစ်ညတွင် ရှင်းလင်းနေသော ကွင်းပြင်သို့သွားကာ ကောင်းကင်သို့မော့ကြည့် လိုက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သည့်အရာကို တွေ့မြင် မည်နည်း။ ရေတွက်မရနိုင်အောင် များပြားလှ သည့် တောက်ပလင်းလက်နေသော ကြယ်များ ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်တစ်ခု လုံးသည် မဲမှောင်နေသော်လည်း၊ ညမှောင်နက် လေ၊ ကြယ်များ တောက်ပလင်းလက်လေ ဖြစ် သည်။ ”မဖြောင့်မမှန် ဖောက်ပြန်သောလူမျိုး” ဆိုသည်မှာ မမှန်သော ဘုရားများကို ကိုးကွယ်၍ မဖြောင့်မမှန်သော အကျင့်များဖြင့် အသက်ရှင် သော လူ မျိုးကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်း ကင်၌လင်းလက်သော ကြယ်များကဲ့သို့ ဘုရား သင်၏ဘုန်းတော်ကို ကြားပြောရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ထိုအရာများကြောင့် စိတ်ပျက်ခြင်း မရှိဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် ပို၍နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်ခြင်း အားဖြင့် တောက်ပနေသောကြယ်ကဲ့သို့ အခြား သောသူများအား စစ်မှန်သော တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်ကို ညွှန်ပြသောသူဖြစ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယောသံအသက်သာကို ပြန်၍ဆင်ခြင် ကြည့်ကြစို့။ သူ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် ဣသရေ လလူမျိုးများနှင့် ကွာခြားမှုရှိပါသလား။ ၆ရာ ၂၇း၃-၅ သူသည် ဣသရေလ လူမျိုးများအား အုပ်စိုးစဉ် ကာလတွင် ပြောင်းလဲမှု များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဗိမာန်တော်၏ အချို့ အ စိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပြု ပြင်ခဲ့သည်။ သူသည် နိုင်ငံတော်၏ အချို့သောနေရာများ တွင် မြို့များကို တည်ခဲ့သည်။ သူ၏ရန်သူ အာမ္မုန်လူမျိုးများ ကိုလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး သူ့အား အာမ္မုန် လူမျိုးများက များစွာသော ဘဏ္ဍာငွေကို ပေးဆောင် ရသည်။ ထိုသို့သော ခြားနားသည့် အဖြစ်အပျက် များကို ဆိုးရွားလှသည့် ကမ္ဘာမြေကြီးတွင် မည်သို့ သူ စီမံခဲ့သ နည်း။ ၆ရာ ၂၇း၆
” သူသည် သူ၏ဘုရားသခင် ရှေ့တော်သို့ မပြတ်သောခြေလှမ်းဖြင့် လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်”။ သူ၏အသက်ရှင်သည့် နေ့ရက်တိုင်းတွင် ဘုရား သခင်ရှေ့တော်၌ သစ္စာရှိစွာ လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်ကြိမ်တစ်လေမျှ ဘုရားသခင် ၏နောက်သို့ လိုက်သည့်အမှုတွင် ပျက်ကွက်သွား ခြင်း၊ ကောင်းစားသည့်အချိန်၌သာ နောက်လိုက် ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပေ။ မပြတ်သောခြေလှမ်းဆိုသည် မှာ အစဉ်အမြဲ(သို့) အမြဲတမ်းဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ် သည်။ မည်သည့်အခြေနေမျိုးဖြစ်နေပါစေ၊ ဘုရား သခင်နှင့်နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်သောသူ ဖြစ်သည်။ သူ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူအားလုံး ဘုရားသခင်၏နောက်သို့ မလိုက်သော်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်အား ဆက်လက်၍ ဖူးမြှော် ကာ၊ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း ဆက်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီး၌ ဖြစ်ပျက်နေ သောအရာများကို ကြည့်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းအား ဖြင့် ဘုရားသခင်ကိုသာ ရှာဖွေကြည့်မျှော် ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်က သူ့အား အမှောင် ကမ္ဘာ၏ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့အား အလွန်အား ကြီးသော ရှင်ဘုရင်တစ်ဦးအဖြစ် သူ၏ ပတ်ဝန်း ကျင်နိုင်ငံအလယ်တွင် ကောင်းကြီးပေးခဲ့သည်။ သင်ဘုရာသခင်နှင့်အတူ လျှောက်လှမ်းခြင်း၊ အသက်ရှင်းခြင်းကို ဆင်ခြင်ရန် အချိန်ခဏတာ ယူလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မပြတ်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် သင်လျှောက်လှမ်းနေပါ သလား (သို့) သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသော လူများ၏ အသက်ရှင်သော နည်းလမ်းများက သင့်အား လွယ်ကူစွာ စိတ်အနှောက် အယှက်ဖြစ်စေ ပါသလား ဘုရားသခင်၌ အာရုံပြုကာ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ မပြတ်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် လျှောက် လှမ်းပြီး စကြာဝဠာကြီးထဲ၌ လင်းလက်သော ကြယ်ကဲ့သို့ ဆက်လက် လင်းလက်နေပါစေ။
← ကျွန်လား၊ သားလား
တစ်နပ်စာ နှင့် တစ်သက်စာ →